nandroaka — Trip LEE - OFISIALY SITE
Misy olona sasany izay tsy mahay zavatra sasany. Misy mpilalao baskety izay milalao ao amin'ny ligy ny taona sy ny taona ary dia mahavita ny asa manan-karena ary sambatra. Te hilalao ny lalao tia dia naniry ny hanao asa manao izany. Dia nataony izany, ary ry zareo tsara. Dia misy olon-kafa, tahaka Michael Jordan.
Michael Jordana dia noho ny tsara ianao. Lehibe izy - maro no miady hevitra, ny lehibe indrindra. Michael Jordana dia tsy afa-po amin'ny filalaovana fotsiny ny kilalao sy ny fanaovana ny asa. Mike Te ho tsara kokoa noho ny rehetra. Tsy izy anefa no afa-po amin'ny fanaovana izany, dia te-ho ny tsara indrindra. Dia nitoetra tao amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena taty aoriana noho ny olona rehetra ary niasa mafy noho ny olona rehetra. Ary izany rehetra izany, satria tena izy entin'ny izany faniriana mba nikapoka anao. Ianao nahita izany ny olona tamin'ny efitrano ny laza teny. Mbola sarotra ry namana sy ny fifaninanana toetra nivoaka toy ny tsy eo anatrehan'i. Ka dia nentin'ny.
Azonao atao ihany koa ny miresaka momba ny mpanakanto tahaka an'i Lil Wayne. Misy rappers izay sitrakao fotsiny mantsy ny ho olo-malaza sy manangom-bola. Tsy Lil Wayne. Tiany ho ny lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra. izy homana, matory, ary miaina ny mozika. Mihaino ny tenany. Velona ao amin'ny Studio. Izy angamba nanadino ny rima kokoa noho ny ankamaroan'ny rappers efa nanoratra. Tao an-tsainy, dia tsy ho afaka ny hanorim-ponenana noho ny zavatra kely noho ny lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra. Nahoana? Satria ny tena entin'ny ny te-ho ny tsara indrindra.
Raha ny mahazatra dia rehefa miresaka momba ny ho voaroaka, izy ireo hoe zavatra toy izao. Zareo niresaka momba ny olona izay asa-mirona, na tapa-kevitra ny hahomby amin'ny sahany. Anefa dia misy kokoa ny ho entin'ny ho an'ny Kristianina? Inona no mba ho voataona ianao ka entin'ny? Inona no tokony mitondra fiara ny Kristianina, ary aiza no tokony mitondra fiara izany ho antsika? Tsara Mihevitra aho fa afaka mahita ny valin 'io fanontaniana io ao amin'ny Romana 12.
Rehefa mazava tsara mamelatra ny fotopampianaran 'ny Filazantsara ao amin'ny Romana 1-11, Paoly mitodika ny milaza amintsika ny fomba tokony ankehitriny velona. Iraika ambin'ny folo toko voalohany no momba izay tokony hino, Ahoana isika dia voavonjy, izay nataon'Andriamanitra ao amin'i Kristy, izay hataon'Andriamanitra ao amin'i Kristy, sns. Ary ao amin'ny toko faha 12, I Paoly manao fanovana tanteraka mba hilaza amintsika izay tokony hataontsika. I Paoly ao amin'ny Efesianina manao izany sy Kolosiana koa.
Koa tiako antsika mba hijery io andalan-teny, ary mijery ny zavatra telo tokony hataontsika amin'ny fahazavan'ny izay efa nambara eto.
Handahatra eo aminareo aho, noho izany, rahalahy, noho ny famindram-pon 'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho sorona velona, masina sy ankasitrahan'Andriamanitra, izay no fanompoam-pivavahana ara-panahy. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao ity, fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, fa ny naka fanahy mba hamantatra izay ny sitrapon'Andriamanitra, izay tsara sady ankasitrahana no tonga lafatra. (Romanina 12:1-2)
I. Hoenjehin 'ny famindram-po
Ary rehefa manao izany i Paoly fanovana, dia mahafinaritra antsika. Miangavy mafy izy, -pahefana izy Mampirisika antsika mba hiaina amin'ny fomba sasany. Fa alohan'ny mijery izay no Mampirisika antsika hanao, Te-hijery ny fomba mahafinaritra ho antsika.
Handahatra eo aminareo aho, noho izany, rahalahy, noho ny famindram-pon 'Andriamanitra… (Romanina 12:1ny)
Mba lazao anay ny fomba tokony ho velona i Paoly dia tsy hoe ho velona fomba iray satria "Te-ho lehibe indrindra, na masina indrindra,"Na satria" izany no mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina upstanding ho velona,"na, "Nampianatra antsika ny reninay tsara lavitra noho ny,"Na, "Mba ho tia anao Andriamanitra." Tsy misy, dia manome antsika hafa karazana antony manosika.
Misy fahasamihafana lehibe tokoa eo izay izao tontolo izao no entin'ny, ary inona no tokony ho entin'ny. Vao haingana aho no niresaka tamin'ny vehivavy iray izay anisan'ny tompon'ny orinasa izay izy sy ny mpiara-miasa nanomboka Taona maro lasa izay. Nolazainy tamiko ny momba ny raharaham-barotra sy ny fomba niasa mafy izy. Avy eo dia hoy izy tamiko ny momba ny ankizy rehetra nananany sy ny halehiben'ny fitiavany azy ireo. Ary hoy izy fa ny fiainany dia ny momba ny raharaham-barotra izy nanomboka sy ny zanany. Dia nanondro ireo toy ny fitiavana voalohany indrindra, sy ny antony manosika noho ny manao ny zava-drehetra fa izy no.
Ary izay toa toy ny zavatra tsara dia tsara ny manao hoe. Izy tia ny ankizy sy ny asany. Fa tiako ho fantatrareo fa ny Kristianina dia tokony atosiky ny zavatra lalina. Fa ny antony manosika ny Kristianina tsy mijanona miaraka na inona na inona eto amin'ity tontolo ity. Noho izany dia tokony tia sy hanome ho an'ny ankizy sy ny tokony hiasa mafy sy tokony mihitsy aza mitady ny mahafinaritra ahy ny asa ataontsika. Nefa tsy misy ny olona no tokony ho antony manosika farany. Tsy misy izay tokony ho zava-dehibe indrindra izay mitarika antsika.
Eto i Paoly dia manondro ny zavatra ivelan'ny tenantsika sy ny eto an-tany velona ho famporisihana. Izy mahafinaritra ho antsika, fa tsy amin'ny zavatra azontsika atao ho an'ny olon-kafa, fa izay efa nataony ho antsika. Izy mahafinaritra ho antsika ny famindram-pon 'Andriamanitra.
Rehefa milaza i Paoly ny famindram-pon 'Andriamanitra, Inona no mety ho izy no ao an-tsaina?
Mety ho nieritreritra i Paoly ny Filazantsara be voninahitra Andriamanitra dia nanome antsika. satria in 1:16, Hoy i Paoly Filazantsara ity dia, "Ny herin 'Andriamanitra ho famonjena, amin'ny Jiosy aloha ary avy eo ho amin'ny teny grika. "
Na dia mety ho nieritreritra ny toko faha-efatra, izay milaza, "Sambatra izay voavela ny helokao, ary voasarona ny fahotany; sambatra izay olona manohitra izay ny Tompo dia tsy isaina ny fahotany. "
Na mety dia ny mieritreritra momba ny toko faha-dimy izay milaza, "Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy."
Na dia mety ho nieritreritra ny toko faha-valo izay milaza amintsika fa, "Andriamanitra no nanao ny lalàna izay malemy ny nofo tsy afaka atao. By naniraka ny Zanany…"
Na Heveriko fa mety ho mieritreritra ny toko faha-sivy, izay milaza amintsika "fa ny famonjena dia tsy miankina amin'ny asa mafy olombelona, fa amin'Andriamanitra izay mamindra fo "
Heveriko fa i Paoly dia manana ireo rehetra ireo fahamarinana kanto momba ny famindram-po ao an-tsaina eto.
Andriamanitra dia nanome antsika ny famindram-po, Izy no manome antsika ny famindram-po, ary Izy no hanome antsika ny famindram-po. Tokony ho antony tsy noho ny famindram-po no efa efa nahazo, fa amin'ny famindram-po isika, dia hahazo.
Ary Paoly dia nanao tamin'ny fahazavana izany famindram-po, eto dia fomba fiainanao. Tokony ho antony, entin'ny izany famindram-po.
Noho izany isika dia entin'ny hanoanana hihinana, ary ny sasany dia entin'ny iray te-ho lehibe ny hiasa mafy kokoa noho ny olon-kafa. Koa raha ny Kristianina no tokony entin'ny ny famindram-pon 'Andriamanitra, Inona no tokony ho mitondra fiara ireo famindram-po azy ireo?
II. Horoahina ny fotoam-pivavahana
Hatolotrareo ny tenanareo ho sorona velona, masina sy ankasitrahan'Andriamanitra, izay ara-panahy ny fanompoam-pivavahana. (Romanina 12:1amin '-d)
Ary rehefa miteny ny Romanina i Paoly mba hanolotra ny tenany ho sorona, ny teny ampiasainy dia natao mba hanondro azy ireo hiverina ho any amin'ny Testamenta Taloha fanompoam-pivavahana sy ny fanatitra rafitra. Aoka àry isika hiresaka momba izany fohifohy
ny. Old Testament Background
Andriamanitra dia masina. Ny olona dia tsy. Olona tsy mendrika ny ho eo anatrehan'Andriamanitra, na ny manatona azy amin'ny fomba rehetra, fa Andriamanitra mamindra fo i ampy mba hanenjika ny vondrona ny mpanota, Isiraely, ary hamela azy ireo mba hanana fifandraisana Aminy. Fa satria Izy no masina, ary ry zareo mpanota, izy ireo tsy azo avela fotsiny manatona Azy tsy fomba tranainy. Tsy afaka hanompo Azy tahaka izy ireo ny sampy sy ny andriamani-diso ireo dia niankohoka. Raha izy ireo handeha hanompo an'Andriamanitra dia tsy maintsy ho eo ny teny. Izy ireo ihany no afaka manatona Azy ny fomba nametraka ka namela.
Koa rehefa avy nanolotra ireo olona ireo, Andriamanitra dia nanome azy ireo didy sy nomeny tari-dalana hentitra ny fanompoam-pivavahana. Andriamanitra nilaza tamin'izy ireo mba hanorina tabernakely ary dia nanome azy ny fanatitra rafitra. Nahatonga hentitra didy ho an'ny fomba mety hanompo Azy sy hanompo Azy. Ny famonoana sy ny fanaovana sorona biby dia be anisan'ny Testamenta Taloha fanompoam-pivavahana. Rehetra ny olona nasainy hanao sorona ireo mba hanatona an'Andriamanitra.
Ireo sorona izy ireo niaiky ny fahotany sy mila famelan-keloka sy ny sorona Nampahatsiahy azy ireo ny amin'ny fahamasinana. Ireo biby ireo natao mba hampisehoana ny olona fa rehefa manota, ny fahafatesana no sazy. Ny biby maty izy ireo fa tsy. Ny fanatitra dia natao ho anisan'ny fiainana iray nipetraka tany fankatoavana an'Andriamanitra.
Toy izany koa ny toerana izay afaka hihaona amin'Andriamanitra dia ny tabernakely (kely lay Andriamanitra izay nitoetra) ary tatỳ aoriana, ny tempoly. Mazava ho azy fa Andriamanitra na aiza na aiza, Fa izao no nanorina ny. Hoy izy tamin'izy ireo mba hanompo Ahy, amin'izao fomba izao, eto amin'ity toerana ity. Rehefa milaza i Paoly isika mba hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra ho fanatitra velona, dia tokony hahatsiaro ity tontolo fanatitra.
Tsara ny NT mazava tsara, fa sorona ireo dia tsy natao ho maharitra. Izy ireo natao mba milaza ny farany sorona, Jesosy. Mitovy amin'ny biby, izay tsy maintsy ho madio, Jesosy no sorona tonga lafatra noho ny fahotantsika. Hebreo dia milaza amintsika fa ity sorona farany dia indray mandeha-for-rehetra. Tsy tsy maintsy miverimberina. Dia nitsangana teo amin'ny fitoerany, ary maty hisolo antsika. Fa tsy toy ny sorona biby, Jesosy nitsangana tamin'ny fahasoavana telo andro tatỳ aoriana, nandresy ny fahavalontsika. Ka ny ho avy Jesoa, tontolo tranainy ity fanatitra lasa.
Ny fiavian 'i Jesoa manova ny fanompoana an'Andriamanitra mandrakizay. Ny iray ny toerana tena ohatra izany dia ao amin'ny Jaona toko faha-efatra ny vehivavy teo am-pantsakana.
Ary hoy ravehivavy taminy, "Tompoko, Hitako fa mpaminany Hianao. Ny razantsika nivavaka eto amin'ity tendrombohitra ity, nefa ianareo milaza fa any Jerosalema no toerana tokony hivavahana. "Hoy i Jesosy, "Woman, minoa Ahy, ho avy ny fotoana raha tsy eto amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema no hivavahanareo amin'ny Ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo; izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, fa ny famonjena dia avy amin'ny Jiosy. Fa avy ny andro ho avy, ary ankehitriny eto, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny Ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny Ray koa mitady ny olona toy izany ny mpivavaka aminy. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. " (John 4:19-24)
Nihevitra io vehivavy fa satria i Jesosy dia Jiosy, tiany azy hivavaka tany Jerosalema tao amin'ny tempoly. Ny tempoly dia, amin'izao fotoana izao, tany izay namela ny vahoakany hanatona Azy. Tsara i Jesosy mazava fa ny fahafatesana, vaovao ny fotoana ho avy.
Isika tsy maintsy hihaona amin'Andriamanitra ao amin'ny toerana manokana amin'ny iray manokana ny sorona biby. Afaka hihaona amin 'Andriamanitra na aiza na aiza! Noho ny nahafatesan'i Jesosy, amin'izay fanatitra atao maina. I Jesosy dia tsy hoe fotsiny ny fanatitra, fa Izy no tempoly vaovao ny sorona izay mitranga. Ny toerana izay tsy maintsy ho hivavaka amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Ankoatra ny maha-sorona, ary ny tempoly, Jesosy no mpisoronabe. Izy no lalana ho an'Andriamanitra.
Noho izany dia tsy mila ny mpisorona, na ny biby, na ny trano hivavaka amin'Andriamanitra. Rehetra ilainao i Jesosy! Raha toa ianao ka eto anio ka tsy fantatrao Jesosy, Te-hamporisika anareo mba hibebaka sy hino.
-Ny bodiesThe andininy milaza isika mba hanolotra ny vatantsika. Ankehitriny dia tsy mieritreritra fa hoe isika ihany no manompo an'Andriamanitra amin'ny vatantsika. Mino aho fa i Paoly midika hoe, dia tsy mba hanolotra anisan'ny tenantsika, fa ny tenanareo manontolo ho any amin'Andriamanitra. Ny tena manontolo dia ny sorona izay azontsika atolotra. Izahay hanolotra ny fiainantsika, ny maha, ny rehetra ho an'Andriamanitra.
Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana. Ny sasany mety diplaoma y'all vao haingana, ary nahazo diplaoma fanomezana. Izy ireo fanomezam-pahasoavana izay nomena ho mifarana amin'ny tenany, toy ny kilalao. Ny teboka rehetra ny manome olona anankiray ny kilalao dia mba hahafahany milalao miaraka amin'ny kilalao.
Avy eo misy karazana fanomezana faharoa. Ireo fanomezam-pahasoavana dia omena ho toy ny fitaovana ho zavatra hafa. Dia misy ny sasany aminareo eto izay vao nahazo diplaoma, ary nahazo vola be toy ny fanomezana. ankehitriny, Ahoana raha nitondrany ireo vola fanomezana ho farany amin'ny tenany? Ahoana raha nampiasa ny taratasim-bola sy ny vola ho temotra? Izany no ho rava sy ny mpanome no ho tezitra.
Ny fiainana dia ny hoe karazana fanomezana faharoa. Izany no natao mba ho fitaovana ho amin'ny faran'ny ny fanompoana an'Andriamanitra.
Amin'ny maha-Kristianina, dia tsy homena ny karazana fanomezana voalohany. Tokan-tena rehetra mahazo fanomezana ianao, dia natao ho ampiasaina ho toy ny fitaovana hafa farany. Izany farany fa dia hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny ny fiainanao.
amin '. Masina sy ankasitrahan'Andriamanitra
Nilaza i Paoly fa ireo fanatitra velona dia mba ho masina sady ankasitrahan'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Miaraka amin'ny Testamenta Taloha sorona, Andriamanitra dia nanana toro lalana voafaritra tsara. Fa ny sorona dia tsy maintsy ho madio biby, ny olona maintsy mibebaka sy vonona ny hankatò an'Andriamanitra, sns.
Koa ho antsika, isika fanatitra ny tenantsika ho fanatitra velona. Koa ahoana no hanome ny tenantsika? Andriamanitra dia nanome toro lalana ny fomba ny Kristianina ankehitriny mba hiaina. Izy no nilaza ny karazana fomba fiainana izay ho mampifaly Azy. Raha mijery ny sisa izany indrindra toko, dia hintantsika i Paoly manomboka ny hametraka ny zavatra izay mitovy.
ao amin'ny andininy 3-8 dia miresaka momba ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy ho an'ny mampiasa ny soa ny tenany rehetra. Ary ao amin'ny andininy 9-21 dia mampirisika ny Romanina hifankatia, ary hampianatra azy ireo ny fomba izy ireo mba hifaneraserana amin'ny tsirairay ankapobeny.
Jereo izany koa isika ao amin'ny Efesiana 4 rehefa omen'i Paoly ihany ity karazana-poana. Dia mametraka avy fotopampianarana ao amin'ny Efesianina 1-3, ary avy eo ao amin'ny toko faha 4 ataony toy izany. Dia manomboka milaza azy ireo ny fomba izy ireo hiaina.
Ary nilaza tamin'izy ireo mba miezaka ny firaisan-tsaina ary mampirisika azy ireo fa Andriamanitra dia nanome azy ireo fanomezam-pahasoavana isan-karazany noho ny hanorenana ny vatana. Ary miresaka momba ny tena niara-niasa mba hanorina ny fifampandrosoana.
Community. Tsy afaka maintsy hoe nahita fa na Romana sy Efesianina, Paoly manomboka amin'ny niteny ny vatana ny fiainana. Tsy afaka manolotra ny ainy ho sorona araka izay tokony, raha mbola nipetraka tany mitokantokana. Mba tsy miraharaha ny fiangonana dia ny tsy miraharaha ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao.
Ary mandeha amin'ny ao amin'ny andininy 17-29 mba hamporisika azy ireo hiaina amin'ny fomba izay dia araka izay efa nampianarina sy hamela heloka rehefa Efa voavela. Ary dia mandeha izy tamin'ny sy ny ao amin'ny toko faha 5.
Andriamanitra efa niantso antsika mba ho tahaka azy, izay midika hoe fahamasinana. Izy no nilaza antsika "ho masina tahaka masina Aho." Anefa matetika ny fiainantsika mijery ny mifanohitra amin'ny masina. Fa Izaho kosa manana fampaherezana ny sasany ho anao…
"Koa, raha misy olona ao amin'i Kristy, izy no olom-baovao. Ny ela no nodimandry; indro, Tonga ny vaovao. " (2 Corinthians 5:17)
Inona no hataonao raha nahita zazakely milaza ny ray aman-dreny izay tokony hatao? Mandady manodidina ny trano ny ray aman-dreniny nandidy manodidina? Ianao dia mihevitra izy ireo adala! Nahoana? Satria izy ireo ny ray aman-dreny, fa izy ireo dia manao toy ny zaza. Mampalahelo raha ny olona manana fahefana sasany, tombontsoa fa tsy mety ka hanaraka azy. Izany aza crazier ho Kristianina ny miaina ao anatin'ny fahotana. Rehefa namonjy antsika Andriamanitra, teraka indray izahay. Andriamanitra nanao antsika marika olom-baovao. Tsy maintsy hanaraka izany. Maro amintsika no mbola mihevitra ny tenantsika ho marina ny mpanota. Isika mpanota, fa izahay dia manoatra noho ny mpanota. Fomba mihoatra noho ianao mahita ny Baiboly niantso anay mpanota, aho, dia hahita ny Baiboly niantso anay masina sy ny zanak'Andriamanitra sy ho fanjaka-mpisorona sy nohamarinina.
Rehefa manota, ianao dia tsy ho iza ianao ankehitriny. Ianao miverina any hoe iza ianao taloha ho. Raha mamaky ny Testamenta Vaovao taratasy, Hitanao angamba fa ny Apôstôly dia milaza foana ny Kristianina mba tsy miverina ny fomba taloha. Izy ireo tamin'ny fampahatsiahivana taminy fa izay tsy iza izy ireo intsony.
Noho izany dia mety ho zavatra ao amin'ny efitrano, izay tena tsy mety mankatò ny ray aman-dreniny. Andriamanitra no miantso anao mba hankatò azy ireo sy ny manaiky azy ireo. Mety ho zavatra izay manana be dia be ny ny eritreri-dratsy. Andriamanitra no miantso anao mba hiala avy izany ka ho madio ao an-tsaina. Mety hisy olona tena dia tezitra olona. Andriamanitra no miantso anao ho be fitiavana sy mamindra fo sy mamela heloka. Tsy ampy ho tonga any am-piangonana fotsiny. Andriamanitra no miantso anao ho tahaka an'i Kristy.
Ary Andriamanitra dia nanome hery antsika mba hiaina ireo karazana fiainana.
d. antonony Service
Ary araka ny Paul, izany karazana fivavahana no mahay mandanjalanja ny asa fanompoana. Efa nahita ireo sarimihetsika izay mamonjy olona iray olona iray hafa ny fiainana sy rehefa afaka izany, dia vao manaraka azy rehetra isan'andro isan'andro? Toy ny Matrix 2. Tsara ny valin'ny ny famindram-po dia tokony ho hiringiriny sy tafahoatra ihany koa.
Raha manome ahy ny dolara mba mitsiky, Raha manome ahy lobaka vaovao angamba aho hampihorohoroiko ny tananao, Raha mahazo boky vaovao aho mba niantsoantso Haleloia. Fa raha hanavotra ahy ny fahotako, ary mampanantena aho unearned fiainana mandrakizay, ny hany valin-misaina no fanatitra anao ny fiainako manontolo. Izany no fanompoam.
D. Rehetra ny Fiainana
Koa izao no tokony ho voaroaka any. Ny fiainantsika manontolo dia tokony ho fanatitra velona ity nanatitra ho an'Andriamanitra.
Ny sasany amintsika dia entin'ny ao amin'ny nentim-paharazana heviny ny teny. Te hahomby; tiantsika ny mananika ny tohatra. Ary izany no zavatra tsara. Fa ianao kosa dia tokony ho azo antoka ianao-mitoto vary araka ny tokony ho. No voakasika amin'ny fahombiazana sy ny sata? Sa ianao mahakasika ny fahalasan-manompo an'Andriamanitra?
Ary iza no mitoto vary ho? Ny sasany amintsika hiasa faran'izay mafy, ary isika dia entin'ny ilaina ho an'ny ray aman-dreny 'fankatoavan'ny. Na ny sasany amintsika kosohy ny mba mijery tsara ho an'ny namana. Ary ny sasany amintsika hiasa mafy, mba hampifaliana fotsiny ny tenantsika. Fa mijery isika tsy tokony mitoto vary sy nanatitra ny halain'ny ho ny fianakavianay, na ny fiangonana, na ny tenantsika. Kosohy ny an'Andriamanitra isika. Isika nanatitra ny fanompoantsika Azy. Raha toa ianao ka nanatitra ny fanompoana voalohany indrindra misy hafa noho Andriamanitra, ianareo dia meloka ny fanompoan-tsampy. Mivavaha, fa tsy olona, ​​na inona na inona dia afaka manome.
Na inona na inona ataonao, miasa amin'ny fo, tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny lehilahy, satria fantatrareo fa ny Tompo no handray ny lova ho toy ny valim-pitianareo. Ianao no manompo ny Tompo Kristy. (Kolosiana 3:23)
Ary mazava ho azy ny antony manosika ho fanatitra io dia ny famindram-pon 'Andriamanitra. Ny zavatra fahatelo hitantsika ao amin'io andalana io dia ny tokony ho voaova.
ny. Aza manaraka ny fanaon'izao
Ry rahalahy sy anabavy isika no voantso avy amin'izao tontolo izao. Paoly miresaka momba "ny izao tontolo izao" eto, dia manondro ny eto an-tany sy ny lalana ratsy 'izao tontolo izao iainantsika amin'ny. Izy no miresaka momba ny mpanota fomba miasa fa isika zatra mahita manodidina antsika. Fandikan-teny hafa milaza ny "fiainana ankehitriny izao."
Ny ankehitriny izao dia miaina ao amin'ny fikomiana amin'Andriamanitra. Maro amintsika no mbola mihevitra avy amin'izao tontolo izao ho toy ny namana fotsiny ny sasany mila fanampiana. Tsia dia tsia. Tokony handinika ny fomba tontolo izao mba ho ny fahavalo. Ary isika no tokony hihevitra fa ho toy ny vahoakan 'Andriamanitra isika mba ho fahazavana ho an'izao tontolo izao sy ny fomba, ary isika mba ho mpitory ny Vaovao Tsara izay mamonjy.
Tsy maintsy miezaka mba ho voatariky ny izao tontolo izao. Izany fotsiny no mitranga. Izy ireo hanan-kery ny fisainantsika tsy misy amintsika miezaka. Ny ohatra tsara ny amin'izany dia mafana olana toy ny firaisan'ny samy lehilahy. Isan'andro isika mijery ny fanjakana hafa dia mamela pelaka ny fanambadiana. Ary ny haino aman-jery, ary ny manam-pahaizana, ary ny eritreritra rehetra mpitarika manosika ny fanekena ny Firaisan'ny Samy Vehivavy. Izy ireo manery antsika rehetra miombon-kevitra aminy, ary mba hampandefitra ny fitondran-tena fihetsika. Ary dia hiresaka momba antsika, haneso antsika, ary hitondra antsika toy ireo mpanao mandra-manaiky. Ny tontolo izao hanoto dia mahery. Izy io dia tena mahery amin'izao fotoana izao. Fa isika tsy mba mitsingevana ny amin'izao fotoana izao. Andriamanitra efa niantso antsika mba handeha hanohitra ny amin'izao fotoana izao.
Lehilahy miray amin'ny lehilahy dia mora iray. Ahoana ny fitiavan-tena, na ny fitiavan-karena, na ny avonavona? Ireo no fomba tontolo izao, tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary isika dia tsy azo manaraka ny fanaon'izao tontolo izao.
Andeha hojerentsika Kolosiana 3. Ity no boky iray hafa izay Maneho Filazantsara i Paoly fampianarana, dia nifandimby niambina ary milaza amintsika ny fomba tokony miaina ao fahazavana izany. Noho izany ny toko roa voalohany dia manazava lalina i Paoly zavatra, ary avy eo dia milaza amintsika ny fomba tokony hisy vokany eo amintsika.
amin '. Fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina
Raha tokony ho manaraka ny fanaon'izao ny zavatra izao tontolo izao manao, tokony ho voaova. Ary ny lalana isika ka ovana eo amin'ny fanavaozana ny saina.
Milaza izy ho azy ireo ny hiaina hafa, miorina amin'ny zavatra efa nataon'i…
Tian'Andriamanitra ho voaova. Ary izao no zavatra izay fiovana toa. Tahaka ny fametrahana ho faty izay eto an-tany ao amintsika, ary mitafy ny toetra.
d. Fanavaozana ny Mind
Fa ahoana no mba mampiova ny endriny, ary nataony tamin'ny toetra an'Andriamanitra. Hoy i Paoly mazava tsara, "Amin'ny fanavaozana ny saina."
Tsy te-handre zavatra toy izao. Fa ny saintsika no tokony havaozina. Ny fomba fisainany no androahan'i Ny fanaovantsika, ary ny fisainantsika mila miova. Tsy hoe toy ny rehefa milaza, "Fantatro aho tokony hanao ny marina, fa…"Tsy misy izay mpanota fomba fisainany izay tokony ho niova. Ny nofo mitehina mankany mandeha ny fotoana ary mitady ny fahafahana amin'ny ota. Ary ny nofo ihany no nahatonga ny izao tontolo izao sy ny devoly.
Ny saintsika tokony havaozina isan'andro. Ahoana no hanao izany? Manavao ny saintsika isika amin'ny alalan'ny fitandremana foana ny fomba fisainana eo anoloan'ny amintsika. Isan'andro isika rehefa mandre lainga lainga rehefa lainga avy ao am-pontsika, sy izao tontolo izao, ary ny devoly. Isika tena mila ny fahamarinana hiadiana ireo lainga.
D. Mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra
Ny tanjona izany fiovana dia ny fahaizana mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon 'Andriamanitra sy ny sitrapon' Andriamanitra irery ihany no afaka mitarika anao hiaina ny fiainana izay mampifaly azy. Hitanareo fa momba ny sitrapon 'Andriamanitra ho tsara sy ankasitrahana no tonga lafatra. Rehefa manavao ny sainao, sy ny traikefa ny fiainana voaova, ianao dia ho afaka ny hahita ny fahasoavan'i ny Tenin'Andriamanitra. Ary ianao dia ho afaka ny hahita fa mitarika anao ho amin'ny fiainana sy ny mba Hampifaly Azy.
Tsaroako ny fotoana voalohany ny Teny namely ahy. Tsy mbola nisy toy izany koa satria.
Dia misy ny sasany amintsika izay mangidy sy mamela heloka. Izany no tontolo izao. Ianao no manaraka ny fomba 'izao tontolo izao. Misy ny sasany amintsika izay feno fitsiriritana ary manao fitondran-tena maloto. Izany no tontolo izao. Ianao no manaraka ny fomba 'izao tontolo izao. Mbola misy ny sasany amintsika izay mitokana. Isika dia tsy anisan'ny fiangonana, izany isika dia mitandrina ny fanomezam-pahasoavana ho antsika fa tsy fananganana ny tena. Kosa isika ihany no manao ny tenantsika ho. Izany no tontolo izao.
Tsy maintsy miala amin'ny fomba ireo eto amin'ity tontolo ity, ary miovà amin'ny fanavaozana ny saina. Ary raha ho voaova, dia ho hitantsika ny hatsaram-pon 'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra.
Ny Kristianina dia afaka hiezaka ny ho mpilalao baskety lehibe, na ny mpanao politika lehibe, na lehibe rappers. Fa ireo zavatra ireo tao amin'ny tenany tsy afaka ny ho inona handroaka antsika, ary izy ireo dia tsy farany ny zavatra tokony ho voaroaka any. Raha mikendry ny zavatra eto an-tany sy eto an-tany fahombiazana, ianao dia mikendry ny ambany.
Isika mba ho entin'ny ny famindram-pon'Andriamanitra, noroahina hivavaka amin'Andriamanitra, ary isika dia tokony hiova amin'ny alalan'ny Teniny. Andao hivavaka.
PhillipBavilla • Aprily 16, 2014 amin'ny 3:11 PM • navalin'i
Tiako fa ny toriteny fotsiny fa nanan-, na nanao na isaky ny efa niteny ny marina. Rehefa namaky, aho nahita zavatra maro izay nahita ny tenako aho, kinda manao, nefa aho tsy nanao izany irery, Kristy no hany lalana, Toy ny ao amin'ny Jaona 14:6, ary na oviana na oviana ny fahoriana avy manodidina, Kristy no hany hery izay ve mila, araka ny voalaza ao i Paoly Philipians 4:13. fa somary kinda nahazo zavatra ho an'ny Filazantsara izany zavatra Rap, ary izaho ho entin'ny Kristy mba ho sahy ho Azy amin'ny toe-javatra rehetra, na ny eto an-tany, na na ny fony tao amin'ny tranon 'Andriamanitra manao ny toriteny na ny fanoloran-tena. Mivavaka aho mba hananan'izy ireo fahasahiana, ary im manao ny tsara indrindra mba hanam-paharetana.
Liam • Aogositra 19, 2014 amin'ny 7:14 PM • navalin'i
Awesome, awesome lahatsoratra diany. Tandremo en pumped ho avy sy ny rakikira vaovao
Lawrence • Aogositra 27, 2017 amin'ny 8:42 PM • navalin'i
Always fanamby. Misaotra.